Emirates na-ebido ụgbọ elu Mauritius, ka agwaetiti ahụ maliteghachiri imegharị ndị njem mba ofesi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Mauritius » Emirates na-ebido ụgbọ elu Mauritius, ka agwaetiti ahụ maliteghachiri imegharị ndị njem mba ofesi
Site na 15 Julaị ruo 30 Septemba 2021, Mauritius ga -emepe ndị njem ọgwụ mgbochi yana ụmụ amaala Mauritian ókè ya.
Emirates ga -arụ ụgbọ elu abụọ kwa izu na Mauritius malite na July 15.
Ụgbọ elu ahụ ga -ebuga ụgbọ elu ya nke Airbus A380 gaa ebe a na -ewu ewu na Oke Osimiri India site na 1 Ọgọst.
Ndị njem nwere ọgwụ mgbochi nke ọma nwere ike ị nweta ezumike izuike na nchekwa.
Emirates ekwuputala na ọ ga-amalitegharị ọrụ ndị njem na Mauritius n'oge ọkọchị a site na iji ụgbọ elu abụọ kwa izu site na 15 Julaị, ka mba agwaetiti ahụ ji nwayọọ nwayọọ na-emepe ndị njem mba ofesi. Iji mezuo ihe achọrọ n'ahịa, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ekwuputala na ọ ga -ebuga ihe ngosi ya Emirates Ụgbọ elu A380 na -aga Mauritius malite na Ọgọst 1. Ndị njem nwere ọgwụ mgbochi zuru oke nwere ike ịnụ ụtọ njem ezumike na nchekwa na ndepụta ebe nchekwa COVID-19 nke akwadoro gafee agwaetiti ahụ.
Ụgbọ elu Emirates na Mauritius ga -arụ ọrụ na Tọzdee na Satọde. Malite na July 15, a ga -enye ụzọ ahụ site na iji a Boeing 777-300ER ụgbọ elu, na site na 1 Ọgọst, na-eji ụgbọ elu Emirates A380. Ụgbọ elu Emirates EK 701 ga -apụ na Dubai 2: 35hrs wee rute Mauritius n'elekere 9:10 nke abalị. Ụgbọ elu nloghachi ga -arụ ọrụ na Fraịde na Sọnde. Ụgbọ elu Emirates EK 704 ga -apụ Mauritius na 23: 10hrs wee rute Dubai na 5: 45hrs oge mpaghara, n'echi ya.
Ahụmịhe Emirates A380 ka bụ ọkacha mmasị n'etiti ndị njem maka ụlọ ya sara mbara na ntụsara ahụ na ụgbọ elu ahụ ga -aga n'ihu na -agbasawanye mbubata ya na nloghachi chọrọ. Emirates na -arụzi A380 ugbu a na New York JFK, Los Angeles, Washington DC, Toronto, Paris, Munich, Vienna, Frankfurt, Moscow, Amman, Cairo, na Guangzhou.
Site n'ụsọ osimiri aja aja na -acha ọcha, mmiri doro anya kristal, na ọmarịcha ala - Mauritius ka bụ otu ebe ezumike kachasị ewu ewu, na -adọta ndị njem n'ofe America, Europe na Middle East. Ndị njem Emirates nwekwara ike ịnụ ụtọ ebe ndị ọzọ na Oke Osimiri India, ebe ụgbọ elu na -enye ụgbọ elu 28 kwa izu na Maldives na ụgbọ elu asaa kwa izu na Seychelles.
Site na 15 Julaị ruo 30 Septemba 2021, Mauritius ga -emepe ndị njem ọgwụ mgbochi yana ụmụ amaala Mauritian ókè ya. Ndị njem nwere ọgwụ mgbochi ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ “ezumike ụlọ oriri na nkwari akụ” ma họrọ site na ndepụta nke ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelsụ mara mma n'ofe agwaetiti ahụ. Site na 1 Ọktoba, Mauritius ga -amalite ịnabata ndị njem ọgwụ mgbochi nke nwere ike inyocha agwaetiti ahụ n'enweghị ihe mgbochi.